Migrationsverket oo sii hormarinaysa awooda xirfad ee arrimaha LGBTQ - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Migrationsverket oo sii hormarinaysa awooda xirfad ee arrimaha LGBTQ
La daabacay fredag 4 augusti 2017 kl 10.35
"Ma helaan talo siin"
Calanka qaasaan roobaadka. sawir: Gregor Fischer
Xukumadda ayaa howl u siisay laanta socdaalka sii wadidda shaqada ah hubinta tayada caddaaladda marka ay timaado magangelyo doonka dooqooda galmo u cuskada kiisaskooda.
Ujeedadana waxa ay tahay sidii loo xoojin lahaa awoodda xirfadeed ee howl-wadeenada hey’adda.
Xukumaddana lacag dhan labo milyan oo dheeraad ah ayey laanta socdaalka ku siisay si loo hubiyo in dadyowga LGBTQ laysku yiraahdo loola dhaqmo si xushmad iyo qaderin ku dheehan tahay marka ay maganegeliyada ka dalbadaan Sweden.
Magangeliyo doonka ah LGBTQ ayaa ah dad bulshada inteeda kale banaanka ka ah, wax taageero iyo talo siin ah dhanka kiiskooda magangeliyo ama sida Sweden ugu noolaanayaan ma helaan, sidaas waxaa tiri Jasminé Mehho oo isku duwaha dadka dalka cusub ka ah ururweynaha RFSL oo matala dadka laysku yiraahdo LGBTQ.
- Waa arrin dhibaato weyn ku dadka LGBTQ in ay bulshada banaanka ka ahaadaan ayey tiri.
Hey’adda socdaalka ayaa sannooyin badan ku howlanaa shaqo la xiriirta xaaladaha ku wareegsan LGBTQ magangeliyo doonka ah. Qayb ka mid ah shaqada hey’adda ayaa ah sidii kor loogu qaadi lahaa awooda khabiirnimo ee howl-wadeenada hey’adda ka howlgala. Hey’adda Migrationsverket ayaa sidoo kale hirgelisay hanaan gooni ah oo loogu talogalay dadka magaliyo doonka ah ee kiiskooda u cuskada dooqooda galmo, iyadooda howl-wadeenada hanaankan gacanta ku haya ku jiraan dad khabiir ku ah arrimaha LGBTQ, sida lagu yeri war qoraal ah ka soo baxay todobaadkan xukumadda.
Toddobaadka Pride Stockholm ka dhacaya
måndag 31 juli 2017 kl 15.57